Ciidamada Faransiiska oo Weerary Saldhig Shabab ku leeyihiin Buulo Mareer iyo Al-Shaabab oo Sheegtay in Sargaal Faransiis ah Dileen - iftineducation.com
Ciidamada Faransiiska oo Weerary Saldhig Shabab ku leeyihiin Buulo Mareer iyo Al-Shaabab oo Sheegtay in Sargaal Faransiis ah Dileen
aadan21 / January 12, 2013
Dennis Allex ayaa lagu afduubay Muqdisho 2009kii.
iftineducation.com – Laba askari oo ka mid ah ciidanka qaaska ah ee Faraniiska iyo qofkii ay badbaadinayeen ayaa lagu dilay tuulada Buulo Mareer ee koonfurta Soomaaliya kadib markii ay qaadeen weerar ay ku badbaadinayaan qof Faransiiska u dhashay oo lagu afduubay Soomaaliya 2009kii.
Wasaarada gaashaandhiga ee Faransiiska ayaa sheegtay in Denis allex oo ka tirsanaa sirdoonka Faransiiska ay dileen dadkii afduubay, kadib markii uu dagaal dhexmaray maleeshiyada islaamiyiinta iyo ciidamada Faransiiska. Toddobo iyo toban islaamiyiin ayaa lagu dilay weerarka.
Denis Allex ayaa lagu afduubay magaalada Muqdisho sanadkii 2009kii.
Weerarka ayaa xalay ay qaadeen ciidamada qaaska ah ee Faransiiska iyagoo lagu keenay helikontar saldhig ay islaamiyiinta ku lahaayeen koonfurta Soomaaliya.
King Khan oo noqday xiddiga ugu saameynta badan India sanadkan.
Magaalada Muqdisho oo mudooyinkaan dambe la ciir ciireeysa gawaarida ay isticmaalaan dadka qurba joogta ah ee kusoo noqday dalka.